Musharaxa Xaaji Maxamed Yaasin Oo Fadeexoobay sababti Akhri | Latest News	Saturday, May 25th, 2013	Home
Musharaxa Xaaji Maxamed Yaasin Oo Fadeexoobay sababti Akhri
Aug 10, 2012 - jawaab	Aqrisatay:1316Musharaxa Xaaji Maxamed Yaasin oo ka mid raga isku soo taagay dorashada 20 ka agosta oo maalmo qura ka harsan tahay ayaa isku dhiibay rag kale oo xifaaltan siyaasdeed kala dhaxeeyay Musharaxa.
Kulan aay maanta iskuugu yimadeen musharaxin fara badan oo doonayay in dalad qura ku midoobaan, ayaa waxaa uu ,ka hor qirtay in uu yahay nin maal qabeen ah isla markaasina kursiga ku doonayay in uu ku iibsado lacag balse taasi maanta surta gal aheyn sida hadalka u dhigay waxaa uu sheegay in aay jiraan rag fara badan oo ugu cad cad xiligaani.
Maanta ka bilow waxaa aaminsanaa waxaa aay ka baxday daaqada, raga ila midka ah ee aaminsan lacagta waxaa u sheegaya in maanta xamar is badal ka jiro kursina la iibsan karin ayuu hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay Xaaji Maxamed Yaasin oo u muuqday in uu ku hungoobay musharaxnimadiisa bisha agost ee aan ku guda jiro.
Si kastaba ha ahaate Xaaji Maxamed Yaasin ayaa ka mid ahaa Musharaxinta Mar uun in madaxweyna maqlaan ku qafifay isla markaasina ku baxiyay dhaqaale fara badan.
Dhaqaalaha ugu baxay Xaaji Maxamed Yaasin, waxaa aay tusaale u noqanaysa musharaxin fara badan ee aaminsan maanta in aay iibsan karaan kursiga jececna in aay wax waliba maasuq maasuuq iyo laalush kala daba wareegan baarlamanka cusub ee la soo xulaya.
Dalada cusub ee musharaxinta ah ayaa u muuqda kuba ayaga dhexdooda kala shakin doonayana ruux waliba in uu kaalintiisa ka muuqda balse la arki doone waxaa aay soo kordhisa midoobida 13 musharax ee ku midoobay maanta muqdisha.